सिराहा नगरपालिकामा एमाले विजयी
२०७९ जेठ ५ बिहीबार १०:४०:००
सिराहा नगरपालिको मेयर र उपमेयरमा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। एमालेका जिल्ला उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. नवीनकुमार यादव मेयर र बबिताकुमारी साह उपमेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सिराहाले सार्वजनिक गरेको मत परिणामअनुसार मेयर डा. यादव दुई हजार दुई सय २३ मत अन्तरले विजयी भएका छन् । उनले ११ हजार एक सय ४३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश महामन्त्री उपेन्द्रकुमार यादवले आठ हजार सात सय २० मत पाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका नगर अध्यक्ष एवं निवर्तमान मेयर अशेश्वरप्रसाद यादवले सात हजार सात सय ३४ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका रिताकुमारी यादवले पाँच हजार नौ सय तीन मत प्राप्त गरेका छन् ।
मेयरमा निर्वाचित डा. यादव स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा जसपा नेपालका अशेश्वरप्रसाद यादवसँग एक सय ७१ मत अन्तरले पराजित भएका थिए । यस्तै उपमेयरमा निर्वाचित साहले १० हजार एक सय २६ मत प्राप्त गरेका छन् । उनी एक हजार पाँच सय ३७ मतअन्तरले विजयी भएकी छिन् । निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी सरिताकुमारी यादवले आठ हजार पाँच ८९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी शशि ऋषि मित्रा माझी मुसहरले सात हजार आठ सय ५५ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी रवीन्द्रकुमार साहले ६ हजार सात सय ४२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
मेयरमा निर्वाचित डा. यादव ०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट सिराहा क्षेत्र नम्बर ३ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका थिए । ०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सिराहा नगरपालिकाको मेयरमा एक सय ७१ मत अन्तरले पराजित भए पनि एमालेकी डा. नमिता यादव उपमेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
सिराहा नगरपालिका मेयरमा एमाले र उपमेयरमा कांग्रेसको अग्रता
सिराहा नगरपालिका– १० मा एमालेको प्यानलै विजयी
सिरहा नगरपालिका १ को वडाध्यक्षमा जसपाका महेश कुमार यादव विजयी